नेपाल एयरलाइन्सले २३ अगष्टमा काठमाडौँ–दुबइ उडान गर्ने – Khabar PatrikaNp
August 21, 2020 182
काठमाण्डौ । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले काठमाडौँ–दुबइका लागि रद्द उडान आगामी २३ अगष्टमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा उक्त दिन दुबइबाट काठमाडौँका लागि टिकट लिइसकेका यात्रुका लागि उडान सञ्चालन गरिने निगमले आज विज्ञप्ति मार्फत जनाएको हो ।
उक्त उडानमा कोभिड–१९ नेगेटिभ रिपोर्टसहित यात्रा गर्न पनि निगमले अनुरोध गरेको छ । निगमको उडान तालिका अनुसार बिहान ७ः३० बजे काठमाडौँबाट दुबइ जाने जहाज सोही दिन दिउँसो ४ः१५ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने जनाइएको छ ।
निगमको गत १८ अगष्टका लागि दुबइबाट काठमाडौँका लागि तय गरिएको उडान यात्रुलाई काठमाडौँमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन नभएको भन्दै सरकारले स्थगित गरेको थियो । काठमाडौँबाट २३५ यात्रु तथा १५ टन कार्गो लिएर गएको निगमको वाइड बडी जहाज दुबइबाट रित्तै फर्किएको थियो ।
जहाज रित्तै फर्केपछि सम्बन्धित निकायको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उडानका लागि दुबइ एयरपोर्टमा तयार रहेका यात्रु अलपत्र परेका थिए । बिहिबारको मन्त्रिपरिषद् वैठकले उद्धार उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो ।
Prevकोरोना नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म १२ अर्ब खर्च,खर्चको विवरण सहित
Nextश्रीमानलाई छोडेर फेसबुकमा लब परेको केटा संग भाग्दा बम्बईमा बेचिन पुगिन…!
सुत्नु अघि सुपा देउराली माइको दर्शन गर्दै ,भोलि मंसिर मंसिर ०९ गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस
६ बर्षपछि चिहान खनेर हेर्दा जिउदै भेटियो, रातको १२ बजे झाक्रीले देखाउदा सोच्नै नसकिने चमत्कार (भिडियो सहित)
प्रत्यक नङमा रहेको सेतो आधा चन्द्रमा निशानको अर्थ यस्तो हुन्छ
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33590)